China Stainless Steel Knotted Rope Mesh miaraka amina orinasa Long Life Life sy mpamatsy | Boegger
Tady matevina vita amin'ny vy tsy miovaova
Jiro vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia vita avy amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta 304, 316, 304L, 316L. Ary ny fanamboarana tady roa an'ny tady vy tsy misy fangarony dia 7 × 7 sy 7 × 19, ary 1 × 7 sy 1 × 19 dia omena koa. Ny zoro mahazatra dia 90 °. Ny harato dia tsy afaka mandratra tanana noho ny fahalemeny. Ary tsy handratra biby na vorona koa io. Noho izany dia ampiasaina be dia be toy ny vy zoo vy hiarovana ny biby izy io, ary afaka mahatonga ny mpitsidika hankafy biby tsy misy atahorana. Ankoatr'izay, izy io dia ampiasaina ho toy ny harato aviary vy ary tranom-borona hahamety ny vorona hipetraka.
Rafitra mamatotra tadin'ny kofehy
Antsipirian'ny kofehy vita amin'ny tadin'ny kofehy
Fahaizana avo lenta
Ny fantsom-bolan'ny tariby mifamatotra dia marobe sy be mpampiasa amin'ny lafiny manaraka:
Efijery fananganana. Fiarovana amin'ny fahalavoana.
Fefy fiarovana. Helipad
Sarin'ny fizarana Tava maitso.
Fialofana zoo. Fiara fijanonana sy garazy.
Atsofohy ny takelaka balustrade. Fitaovana fivarotana sns.
Fiarovana tena tsara
Miaraka amin'ny fisaka ambonin'io, ny harato tariby mifamatotra dia misoroka tsara ny olona sy ny biby voarangotra. Ho fanampin'izany, ity harato ity dia mahatohitra tena fiantraikany, izany hoe afaka manome fiarovana faran'izay tsara amin'ireo biby mihidy ary mampihena ny fahasimban'ny fianjerana.
Vita amin'ny alim-bary avo lenta AISI 304 na AISI 316, ny fantsom-bolan'ny tariby mifamatotra dia manana fananganana tsy simba ho an'ny fiantohana mahery vaika sy fanoherana fanoherana. Izy io dia manana fanoherana tsara sy fitafiana tsara, mahazaka entana mavesatra be mitondra ny oram-panala. Mandritra izany fotoana izany dia mahatanty ny fitsakoana manimba ataon'ny mpikiky sy ny bibikely hafa.
Fananana fananana aina
Ny lavaka rombo mitovy dia mamela ny mangarahara avo tsy misy fanakanana ny fahitana. Ny fisehoany kanto sy ny endriny mateza dia mahatonga azy io hankasitraka kokoa ireo mpamorona zaridaina sy mpanao mari-trano manerana an'izao tontolo izao.
Halavan'ny fiainana midadasika
Ny jiro tariby vita amin'ny kofehy dia mahatohitra ny toetr'andro ka mahazaka ny toe-javatra mafy indrindra toy ny oram-be, oram-panala na oram-baratra aza. Izy io koa dia manana fanoherana avo amin'ny UV, harafesina ary harafesina izay mamela androm-piainana lava mandritra ny 30 taona. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy fikojakojana ny fantsom-bolan'ny tariby mifamatotra ary tsy ilaina ny fanadiovana sy ny firakotra manokana.
Ankoatr'izay, ny harato tariby mifamatotra natolotry ny orinasanay dia tontolo iainana, tsy mora mirehitra ary azo ampiasaina indray. Ankoatr'izay, ny rafitra miovaova dia mamela ny famolahana sy ny famoronan-joro maimaimpoana ho an'ny fitaterana sy fametrahana mora.
Sarina harato vita amin'ny tadiny
Jiro vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Anarana: malefaka tariby harato - karazana knotted.
Fitaovana tariby: vy vy AISI 304, 304L, 316 na 316L.
Fananganana tariby: 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm na 2.5 mm), 7 × 19 (3 ​​mm, 4 mm)
Savaivony tariby: 1/8 ", 3/32", 5/64 ", 1/16" ary 3/64 ".
Haben'ny fanokafana: 1 "× 1", 1-1 / 2 "× 1-1 / 2", 2 "× 2", 3 "× 3" ary 4 "× 4".
Zoro harato mahazatra: 90 °.
Haben'ny harato: W: 20 mm ka hatramin'ny 120 mm; H: 20 mm hatramin'ny 120 mm.
Bolongam-pifandraisana namboarina - telegrama 1/8 "
Code Savaivony tariby Haben'ny lavaka Fiatoana ara-dalàna
KCM-A120 1/8 " 3.2 mm 4,75 "× 4.75" 120 mm × 120 mm 1600 lbs
Kofehy tariby voahidy - tariby 5/64 "
KCM-C38 5/64 " 2.0 mm 1,5 "× 1,5" 38 mm × 38 mm 676 lbs
Volon-tariby voahidy - 1/16 "tariby
KCM-D25 1/16 " 1,6 mm 1 "× 1" 25,4 mm × 25,4 mm 480 lbs
KCM-D38 1/16 " 1,6 mm 1,5 "× 1,5" 38 mm × 38 mm 480 lbs
Volon-tariby voahidy - telegrama 3/64 "
KCM-E20 3/64 " 1.2 mm 0.8 "× 0.8" 20 mm × 20 mm 270 lbs
KCM-E25 3/64 " 1.2 mm 1 "× 1" 25,4 mm × 25,4 mm 270 lbs
KCM-E30 3/64 " 1.2 mm 1.2 "× 1.2" 30 mm × 30 mm 270 lbs
KCM-E38 3/64 " 1.2 mm 1,5 "× 1,5" 38 mm × 38 mm 270 lbs
Previous: Stainless vy ferrule tady harato miaraka amin'ny tanjaka lehibe
Manaraka: Glass tariby miaraka amin'ny effets Visual lamaody